Mutambi wemaWarriors Benjamin Mwaruwaru Omira Kutambira Zimbabwe
Sangano re Zimbabwe Football Association (ZIFA) rinoti kunyange hazvo riri kushoorwa nevatsigiri venhabvu panyaya yemurairidzi wechikwata chema warriors, ine tarisiro yekuti Tom Saintfeit, uyo akapihwa basa iri, achawana mapepa aya muchinguva chishoma chinotevera.
Saintfeit akadzingwa munyika nehurumende achinzi haana magwaro ekuti ashande ari munyika ne bazi rinowona nezve Immigration.
Zimbabwe iri kusangana ne Mali mumutambo we Africa Cup Of Nations qualifier mumwedzi mitanhatu inotevera.
Vatsigiri vazhinji vanoti basa iri raifanirwa kupihwa murairidzi wemunyika, asi ZIFA inoti Saintfiet ndiye ane hunyanzvi hwekuita basa iri nemazvo uye sangano ravo riri mushishi mekuyedza kutsvaga mapepa anoita kuti murairidzi uyu adzoke kunoita basa rake.
Board member weZIFA, Benedict Moyo vanoti vari kushanda siku nesikati kuti mapepa aya abude.
Muneimwe nyaya captain wemaWarriors Benjamin Mwariwari anoti haada kutambira chikwata chemaWarriors sezvo avekuda kupa nguva nehunyanzvi hwake kuchikwata chaano tambira kuBritain che Black Burn Rovers.